Shiinaha Isticmaalka Qalabaynta Qalabka Nalalka Birta ah iyo Warshadda | Daren
Naga soo wac: 0086-18814968885
Fiilooyinka birta ah ee birta ah ee isku xira
Fiilooyinka birta ah ee birta ah ee xarkaha ah-Ball-Lock Xirashada Xirmooyinka
Xarkaha birta ahama ee isku xira Noocyada Ball-Lock Polyester Dahaarka leh
Fiilooyinka birta ah ee birta ah ee isku xira Isku-xidhka-Ball-Lock Dhammaystiran Polyester Dahaarka leh
Ahama Steel Cable Xarkaha-Ball-qufulka Semi-Polyester dahaarka dahaarka
Fiilooyinka birta ah ee birta ah ee isku xira Ball-Lock PVC
Ahama Steel Cable Xarkaha-Ball-qufulka Spring Xirashada xirmo
Fiilooyinka birta ah ee birta ah ee isku xira L-Nooca Ball-Lock Xirashada Xirashada
Fiilooyinka birta ah ee birta ah ee isku xira Isku-xidhka-Ball-Lock
Fiilooyinka birta ah ee birta ah ee isku xira - Ball-Lock Double duub Xireyaasha Uncated
Fiilooyinka birta ah ee birta ah ee isku xira Xargaha-Jaranjarada Multi-Lock Unies Cover
Fiilooyinka birta ah ee birta ah ee isku xira Isku-xidhka Hal-Lock Oo Dhamaystiran Xidhmooyinka Dahaarka leh
Fiilooyinka birta ah ee birta ah ee isku xira Isku-xidhka Hal-Lock Aan Xirneyn
Fiilooyinka birta ah ee birta ah ee isku xira Xargaha-Jaranjarada Multi-Lock oo si buuxda u xirxiran Xirayaal
Ilkaha Nooca Buckles tie band
Ilkaha Woolf Nooca Buckles tie band
Ilkaha Woolf Nooca Miisaanka Buckles tie band
Fiilooyinka birta ah ee aan xarka lahayn
Fiilooyinka birta ah ee birta ah ee loo yaqaan 'Ties-L Noocyada Xirashada Dahaarka leh
Fiilooyinka birta ah ee birta ah ee isku xira Noocyada Polyester ee Dahaarka leh
Fiilooyinka birta ah ee birta ah ee loo yaqaan 'Ties-L Noocyada PVC ee Dahaarka leh
Noocyada birta ahama ee birta ah
Ahama Steel Polyester Bands-nooca Pole
Xarkaha birta ah ee birta ah ee aan xarka lahayn
Xarkaha birta ah ee birta ah ee aan xarka lahayn ee loo yaqaan 'Seies-Releasable Fully Polyester Coies'
Fiilooyinka birta ah ee birta ah ee xarkaha ah ee loo yaqaan 'PVC steel Reies'
Ahama LS Xarkaha Xarkaha Xarkaha
Fiilooyinka birta ah ee birta ah ee aan lahayn ahaanta Dl Xidhiidhada la sii deyn karo
Fiilooyinka birta ah ee birta ah ee birta ah
Fiilooyinka birta ah ee birta ah ee isku xira Isku-xidhka Micro Micro
Xarkaha birta ahama ee alxanka leh
Xadhig fudud oo fudud
Xarkaha birta ahama
Nooca EarTeeeh Buckles-CX Taxanaha
L Nooca Buckle-L / LX Taxanaha
Nooca SL Nooca Isku-xidhka Xakamaynta Universal
Ku marooji Nooca Buckles-LS Series
STT Universal Xarig Bixin
STL ahama birta Jiingado
JEY Quful Qabashada
Calaamadaha Xaraashka ee 'ahama' SM
Ahama steel Easy Read Cable Calaamadaha
SS ahama bir aan daaha lahayn kooxo-taxane SS
SSP polyester steeel ahama / taxane Epoxy dahaarka-SSP taxane ah
SSB bir birta ah oo birta dahaarka leh ee taxan-SSB
Alaabta birta ahama
C001 mashiinka prdouct
Mashiinka C001-1 prdouct
Mashiinka 'LQA prdouct'
LQA-1 mashiin prdouct
CT02 mashiinka prdouct
CT02-1 mashiinka prdouct
CT02-2 prdouct mashiinka
CT02-3 mashiinka prdouct
HT-338 mashiinka prdouct
Mashiinka 'G402 prdouct'
J020 mashiin prdouct
C075 mashiinka prdouct
Qaybta dhejinta iyo qalabkeeda
QL Cable qaybta
KZ Qalabka bir ahaanta ah
KL Qalabka birta ahama
Isticmaalka Qalabka Xakamaynta ee ahama
Waxay leedahay codsiyo badan oo kala duwan oo ku saabsan awooda korontada iyo nidaamyada korantada. Faa'iidooyinkeeda waxaa lagu muujiyey:
1. Alaabada silig ahama ee biraha aan xaddidneyn qaabka iyo cabirka shayga la xirayo;
2. Qaabdhismeedka suumanka fudud wuxuu fududeynayaa kakanaanta fooq dhaqameedka;
3. Waxqabadka wanaagsan ee xariggu wuxuu hubiyaa badbaadada walxaha xidhan;
4. Xarkaha siligga birta ah ee aan xarka lahayn ayaa ah walxaha ka hortagga wax-u-qabashada iyo heerkulka sare u adkaysta si loo hubiyo jawiga quruxda badan iyo shuruudaha ilaalinta dabka;
Codsiga xirmooyinka xargaha birta ah ee birta ah ee warshadaha gawaarida:
1. Fuulooyinka dahaadhka ee tuubbooyinka qiiqa baabuurta. Isticmaalka xarigga fiilooyinka halkii habka alxanka dhaqameed uu ka fogaan lahaa ifafaalaha culeyska jabinaya barta alxanka sababo la xiriira ballaarinta kuleylka. Kordhi nolosha guddiga dahaarka kuleylka iyo hagaajinta kalsoonida. Habka rakibida fudud wuxuu yareeyaa qiimaha tuubada qiiqa.
2. Daboolka boorka ee usheeda dhexe ee gaadhiga. Alaabada biraha ah ee biraha aan xarka lahayn waxay leeyihiin faa iidada aan lagu xaddidneyn cabir ahaan, taas oo yareynaysa tirinta alaabada la dhisay iyadoo ay ugu wacan tahay cabirro kala duwan oo loogu talagalay warshadaha soo saaraya fallaadhaha. Qaab-dhismeedka fudud iyo xoogga la isku halleyn karo ee sarreeya ayaa bixiya waxqabad wanaagsan oo loogu talagalay daboolka boodhka ee mashiinka wadista.
3. Baska bareega. Waxyaalaha isku xira fiilada birta ah ee birta ah waxay xaqiijineysaa isku halaynta baska gawaarida gawaarida oo ay ku xiran tahay xarigga birta ee birta ah ee birta ah. Isla mar ahaantaana, dusha sare ee busbar ayaa laga ilaaliyaa waxyeellada.
4. barkinta hawada. Marka la hagaajinayo barkinta shilka, waxqabadka lagu kalsoonaan karo ee barkinta shilku waa la damaanad qaaday.
5. Waxaa loo adeegsaday marinka biyaha ee gawaarida iyo tubooyinka tubada iyo tubooyinka hawada, xarigga birta ee birta ah ee birta ah wuxuu dammaanad ka qaadayaa xirnaanta, nabadgelyada iyo kalsoonida tuubbada iyadoo si fiican loo giijinayo.
Fadilmo ee alaabada xarkaha biraha birta ah ee birta ah iyo calaamadaha calaamadaha:
1. Kuma xadidna qaabka dusha iyo cabirka shayga la xidhayo;
2. Waxqabadka wanaagsan ee xariggu wuxuu hubiyaa xasilloonida iyo nabadgelyada calaamadda;
3. Qaab dhismeed fudud iyo xargo adag oo xoog leh ayaa yareynaya kharashka maamulka degmada;
4. Xulista qalabka birta ah ee birta ah ayaa qurxinaya deegaanka iyo maamulka dawladda hoose;
Xiriirinta fiilooyinka biraha ah ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa dhinacyada kala duwan ee warshadaha. Fiilooyinka warshadaha, dhuumaha warshadaha, calaamadaha warshadaha, munaaradaha biyaha ee warshadaha iyo dhinacyo kale oo badan ayaa leh waxqabad wanaagsan.
1. Alaabada biraha xarkaha birta ah ee aan xarka lahayn waxay bixiyaan alaabooyin ka kooban 304SS, 201SS, 316SS, 317L, Monel iyo qalab kale si loo hubiyo shuruudaha gaarka ah ee warshadaha looga hortago daxalka iyo ka hortagga dabka;
2. Waxqabadka adkeynta sare wuxuu hubiyaa badbaadada wax soo saarka warshadaha;
3. Habka rakibidda fudud wuxuu bixiyaa sahlanaanta rakibidda warshadaha, wuxuu hagaajiyaa waxtarka shaqada, wuxuuna siiyaa Ilaalin wax ka qabashada xaaladaha degdegga ah.
4. Xarkaha birta ah ee birta ah ee birta ah oo leh dab-damiska iyo ka-hortagga daxalka ayaa xaqiijinaya amniga fiilooyinka warshadaha. Ku darsaday
U ololeynta wax soo saarka nabdoon iyo ilaalinta deegaanka
Alaabada xarkaha biraha aan xarka lahayn waxay muujinayaan faa iidada xoogan ee warshadaha dhuumaha.
1. Wuu xidhi karaa tuubooyin dhexroor kasta oo ay yihiin;
2. Naqshadeynta xargaha gaarka ah waxay leedahay daboolid wanaagsan oo ku jirta booska suunka, iyadoo la hubinayo isku dheelitirka culeyska dhammaan wareegyada xiriirka;
3. Cabbirka haanta tuubbada horay loo sii diyaariyay waxay hagaajineysaa hufnaanta rakibidda dhuumaha;
4. Iska yaree liistada tuubbooyinka isku haysa, xirmooyinka tuubooyinka horay loo sii diyaariyey ayaa isku duubi kara tuubooyin kasta oo ka yar cabirkiisa;
5. Qalabka korantada ee waxtarka sare leh iyo qalabka pneumatic, iyo naqshadeynta xiisadda la hagaajin karo waxay hubineysaa cidhiidhiga iyo xasilloonida rakibidda.
Waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa dhejinta fiilooyinka isgaarsiinta gudaha iyo fiilooyinka isgaarsiinta dibadda.
1. Xarkaha siligga birta ah ee birta ah wuxuu dammaanad ka qaadayaa nabadgelyada xarigga isgaarsiinta adkaysigiisa wanaagsan;
2. Xarkaha siligga birta ah ee birta ah ee gaarka u ah wuxuu keyd u yahay ballaarinta kuleylka ee xarigga, taas oo hubineysa cidhiidhi la isku halleyn karo isla markaana isla markaa hubiya in dusha sare aan la xoqin;
3. Naqshadaynta dusha sare ee dabka dabka oo u gaar ah oo shatiyeysan ayaa xaqiijinaya dabka iyo waxqabadka badbaadinta ee xarigga.
Shuruudaha gaarka ah ee duullimaadyada, isku xirka fiilooyinka birta ah waxay leeyihiin waxqabad muuqda.
1. Isku xidhka xarkaha biraha la isku halayn karo ee lagu kalsoon yahay wuxuu hubiyaa badbaadinta fiilooyinka dayuuradaha ee jawiga adag;
2. Xulashada qalabka dabka ka caagan ayaa buuxiya shuruudaha laga rabo warshadaha duulista;
3. Naqshadeynta gaarka ah ee ilaalinta fiilada ilaaliyaha ayaa dammaanad qaadaysa dusha sare ee fiilada iyadoo la hubinayo in fiilada la xiray;
4. Xarkaha siligga ee biraha ahama waxay ka ciyaartaa faa iido wanaagsan dhuumaha saliida duulista iyo dhuumaha hawada.
Waqtiga boostada: Oct-10-2020
Kudar: SuAo Aaga Warshadaha, Magaalada Liushi,
Wenzhou City, Gobolka Zhejiang, Shiinaha.
Iimayl: jie@sstie.com gao@sstie.com